Su'aal: Ma la daaweyn karaa curyaamidda xubnaha taranka?
Author Topic: Su'aal: Ma la daaweyn karaa curyaamidda xubnaha taranka? (Read 14593 times)
« on: August 27, 2009, 03:49:47 AM »
asalaamu calaykum warax ma tulaahi ww
bacdal salaam su aasha oo kooban walaal xubinka taranka ayaa dhib soo gadhay
waa curyaamay macnaha yaraaday bilaa korin ayuu noqday maxa lagu daawayn karaa
arintaas jazaakumulaaaaaaaah khayraa
Re: Suáal: Ma la daaweyn karaa curyaamidda xubnaha taranka?
« Reply #1 on: August 29, 2009, 04:29:48 PM »
Dhibka aad sheegeyso waa noociis?
waa muhiim in la ogaado dhibka aad ka cabanayso ma yahay mid la daaweyn karo mise?
« Reply #2 on: August 30, 2009, 11:10:39 PM »
thanks walaal hadii aan ka jawaabo su asha hore dhibka soo garay waxaa weyaan
aniga oo yar ayaan ka dhacay gaadhi faras dabadeedna waxaa ii dulmaray shaaga gaadhi faraska
oo iga dul maray xubinka inta tuunbada uun xaga dareenka waa ok
laakin waxaa ka maqan uun koriin oo ilaa hada ma hayo intii uu malintii gadhi farasku dulmaray le kaa ayuun buu wali lee egyahay markaa walaal wax daawo ah oo arintaa iga saacida ayaan uu bahanahay mahad sanid
su aasha kale
walaal waxaan is leyahay uun daawo waa loo heli insha alaaah
« Reply #3 on: September 01, 2009, 02:22:10 PM »
Haduu la kori waayay shilka aad gashay awgii waxay u badanthay in uu ku dhacay waxa caafimaad ahaan loo yaqaanno "Penile Atrophy" ama "Penile Shrinkage" oo ah in xubintii ay yaraatay, kaduudato oo korriimo laáan heshay laakiin haddii sida aad sheegtay dareenka uu jiro waxaan is leeyahay dhib saa u weyn malahan inkastoo ugu muhiimsan tahay xagga dhalidda.
Xaaladdaan daawo loo isticmaalo ee lagu daaweeyo ma garanayo.
Talo ahaan la xiriir takhtar ku taqasusay xubnaha taranka.
« Reply #4 on: September 01, 2009, 02:54:05 PM »
walaal waad mahad san tihiin
doctor takha suus ah oo soomaliya hadii aad taqanan ii gud biya
« Reply #5 on: September 01, 2009, 02:56:05 PM »
cudurka Penile Atrophy isaga laftiisa ii faah faahiya
Views: 87214 April 08, 2011, 09:07:47 PM